Tegay Disability A In Europe sameeyey Easy | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Tegay Disability A In Europe sameeyey Easy
Maxaynu raacayso tareen? safarka tareenka waxaa lagu nasto, wax ku ool ah iyo waxay bixisaa arrin bulsho oo hababka kale ee gaadiidka fudud ma u dhigma karaa. Si kastaba ha ahaatee, safraya naafada ah waxay noqon kartaa dhib in qaar ka mid ah. Tani macnaheedu ma aha ma waxaad ku raaxaysan kartaa madadaalo ah, in kastoo. article Tani waxay bixisaa qaar ka mid ah meelaha aasaasi ah oo aad u baahan tahay inaad tixgelin marka la qorshaynayo aad safarka tareenka sidaas u safraya naafada ah ee Europe waa dhib yar.
Inkasta oo ay jiraan dhab ahaan waa qaar ka mid ah caqabadaha helitaanka, xaqiiqda aasaasiga ah waa in cilmi-baaris badan oo aad samayn, aad safarka more la heli karo iyo madadaalo ahaan doonaa! Tusaale ahaan; Ma ogtahay in burbur ah Herculaneum yihiin ku dhowaad isku mid ah in lana kulmay, laakiin waa wheelchair-friendly? Iyo in rakaab ah safar naafada ah ma aha inay qaataan ka “Jidka dameer” ilaa qarar marka booqday jasiiradda Giriigga ee Santorini? Your fasax uma baahna in ay halgan - aad sameyso shaqada guriga iyo safarka waxaa laga buuxin karaa fududeyn hotel buuxda u heli karo, wadooyinka la heli karo oo u dhexeeya la heli karo dalxiiska soo jiidashada, oo cajiib ah la heli karo waayo-aragnimada safarka.
Waa kuwee tareenka si ay u qaado on Save-A-tareenka haddii aad safarka naafada ah?
Haddii aad leedahay fursado badan aad heli karto (Wadamada qaarkood waxay leeyihiin hal nidaamka tareenka kaliya), isku day in aad doorato side oo bixiya adeegyada ugu talo galay in aad safarka oo leh baahida naafada. kuwaas oo; gargaar Boarding oo la heli karo baabuurta qarsoodiga ah. Musqulaha waa in sidoo kale noqon weyn oo ku filan in ay aad iyo aad wheelchair meel ay la socdaan ilaalo ah ama midiidinka. Sida had iyo jeer, weydiiso su'aalo badan intii aad kartid ka hor si looga fogaado in wax kadis ah oo aan loo baahnayn!
Waxyaabaha lagu raaxeysto iyo Adeegyada
Safarka Gaarka ah leh adeegga iinta kala duwanaan karaan mid ka mid ah gobolka in kale, ku xiran tahay dhowr ah oo kala bixiyc; baabuurta on tareen gaar ah, goobaha ee kala duwan ee saldhigyada weheliyaan marinka iyo xitaa siyaasadda side aad on helitaanka.
Cologne si Tareenadu Brussels
si taxaddar leh baaris tigidhka iyo faahfaahin mar aad hesho. Hubi in aad tahay raaxo leh siyaasadaha iyo qodobada ay si aadan yaabay aad istaagaan kala duwan (gaar ahaan marka safar dibada).
Meelaha iyo XUDUUDDA Weight
Helitaanka iyo off tareenka iska cad waa qayb muhiim ah oo safarka. aad u hubiso in saldhigyada ka tagay iyo imaanshaha waxay leeyihiin dhufto ee heer-sare ama wiishashka wheelchair. Tani waxay ka dhigi doonaa aad u fududaato on iyo aad tareen hesho halka naafada ah safarka.
Milan in ay Tareenadu Pompei
Florence si Tareenadu Pompei
Salerno in Tareenadu lana kulmay
Inta badan sidayaal sameyn doonaa inti inay meel dadka u safraya naafada ah oo ka iman kara boorsooyinka dheeraad ah waxay u baahan karaan (e.g. wheelchair, taangiyada oxygen, iwm). Haddii aad ogtahay inaad u baahan shuruudaha Alaabtoodii dheeraad ah, ha side ogaado ka hor.
Marka aad timaado
Ka dheerow meelaha ugu heli karo ee magaalada. Tani waa mid ka mid ah meelaha ugu adag ee qorshaynta safarka tareenka halka naafada ah safarka. Waxaa laga yaabaa inaad ka heli hotel a la gaari karo weyn, laakiin waxa aad ka heli doontaa marka aad ku socotaan / hirgaliyo albaabka hore? Ma jiraan buuro iyo jaranjarada jiho kasta? waxaad yeelan doontaa in uu hirgaliyo badan cobblestones? Ma jiraan maqaayado heli karo dhow? Waa muhiim in baaritaan xaafadda hoteelka. Waxaad isticmaali kartaa Google Maps Street View si aad u hesho jiifay ee dalka, markaas email hotel la su'aalahaaga.
Iyada oo admin oo dhan inuu jidka, xasuuso inaad qaadato waqti aad u nasato oo wuxuu ku raaxaysan biimayn ah. Qaado waqti waxoogaa ah inuu la kulmo aad rakaabka kale, fiirsadaan daaqadda oo dibadda ah, ama si fudud way lumaan, waayo, in yar sida aad u safarto wadada badan oo ay aadeen ka hor.
Waxaad ballansan kartaa tareenada tigidhada ka mid ah Tareenada ugu dhaqsiyaha badan ee Europe on Save-A-tareenka in ku dhow caga kasta ka sarreeya diiwaangeliso 3 daqiiqo, at the jaban heerka tigidhada tareenka iyo gargaartay ajuurada jaale isnacsiiyeen!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta?, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/traveling-disability-europe/- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#naafada #wheelchair tareen safarka safarka tareenka traveltips